Shiinaha Custom Trolley boorsada iskuulka-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda dugsiga > Boorsada iskuulka
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, muddada dheer ee adeegga, shaqeynta badan, iwm. (2) Marka aad aadeyso iskuulka iyo safarka, waxaad leedahay meel weyn oo lagu keydiyo. , Qaybaha shaqooyinka badan. Dharka biyuhu xiraan, oo si deggan u wajaha roobka.
Bacda taraafikada ardayda
1. Soo bandhigida alaabta ee boorsada iskuulka ee ardayda
(1) Dharka kore ee ardaaga taraleyda ardaaga waxaa laga sameeyaa dharka nylon-cufan oo cufan. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka qoyan bacda. Gudaha, isku-dhafkan wuxuu leeyahay wax-qabad-biyood wanaagsan, oo wuxuu leeyahay bilic sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Shandadeena iskuulka ee ardeyda wax lagu barto waa mid neefsan kara, xirashada u adkeysata, biyuhu diidayaan isla markaana culeyska yareeya.
(6) Dhamaadka suunka garbaha waxaa lagu dhejiyaa boorsada iskuulka oo leh sharooto si looga hortago in suunka garbaha uu dhulka u jiido waqti dheer isla markaana loo ilaaliyo nadaafada bacda iskuulka.
(8) tarooli shandadeena ardeydeena ardeygu wuu kala qaybsami karaa markuu doono. Naqshadeyntaan looma isticmaali karo oo kaliya boorsada gaariga lagu qaato, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa boorsada dhabarka. Hal boorso ayaa loo isticmaali karaa dhacdooyin kala duwan.
2. Xaddidaadaha wax soo saarka (qeexitaannada) boorsooyinka iskuulka ee taraanka ardayda
Boorsada iskuulka ardayda
Dhererka 31cmX Width 14cmX Dhererka 44cm
Hal badeecad oo ku jirta hal bac bac PE ah, 5 kumbiyuutar / kartoon
3. Astaamaha alaabta iyo codsiyada boorsooyinka iskuulka ee ardayda dhigata
(2) Markaad aadeyso iskuulka iyo safarka, waxaad leedahay meel weyn oo wax lagu keydiyo, qeeybyo badan oo shaqeynaya. Dharka biyuhu xiraan, oo si deggan u wajaha roobka.
5. Baakad-dhabarka-hal-baakad ku jirta iyo gaarsiinta
Calaamadaha kulul: Boorsada iskuulka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka